Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra tamin’ny 2010 September 08
08 Septambra 2010
Tantara tamin'ny 08 Septambra 2010
Meksika: Niteraka tondra-drano ny firotsahan'ny orana be loatra tany Veracruz sy Tabasco
Amerika Latina08 Septambra 2010
Niresaka mikasika ny tondran-drano mahery tany amin'ny firenen'ny Mexican Twitter users are reacting to heavy flooding in the states of Veracruz sy Tabasco ireo mpampiasa Twitter Meksikana. Nitsikera ny fitsidihan'ny Filoha Felipe Calderón tany amin'ireo faritra tondraka tany Veracruz ihany koa izy ireo.
Maty noho ny tsy fahafahany miaina intsony tany amin'ny hopitaly miaramila ny alin'ny Alatsinainy i Franklin Brito Tantsaha Venezoeliana raha nanomboka nitokona tsy nihinan-kanina izy tamin'ny Jolay 2009 . Niaina tanaty fitokonana tsy mihinan-kanina maro i Brito nanohitra ny fakan'ny fanjakana ny taniny. Manao hetsika noho ity filazana mikasika ny...
Eoropa Afovoany & Atsinanana08 Septambra 2010
Oman: fandraràna ny VPN tsy ho ela
Oman08 Septambra 2010
Tamin'ny trangana sivana aterineto farany tany Oman, ny Fahefàna Mpanara-maso ny Fifandraisan-davitra any Oman dia nanambara ireo tetik'asany handràra tanteraka ny fampiasàna ireo Tambazotra Virtoaly Mitokana (VPN) ary hitaky ireo orinasa haka ny fahazoan-dàlan'ny Fahefàna Mpanara-maso ny Fifandraisan-davitra izay vao afaka mampiasa izany. Mbola tsy mihatra ilay lalàna vaovao ary...